Akụkọ banyere Mgbasa Ozi | Martech Zone
Akụkọ banyere Mgbasa Ozi
Mọnde, Jenụwarị 9, 2012 Sunday, Jenụwarị 8, 2012 Douglas Karr
Ihe atụ m na-ejikarị ụlọ ọrụ rụọ ọrụ mgbe ha jụrụ m ihe dị iche mgbasa ozi na ahia bụ azụ. Mgbasa ozi m na-arapara na ikpuru na njedebe nke nko ma na-agbanye ya n'ihu azụ, na-enwe olileanya na ha ga-ata. Marketingre ahịa bụ atụmatụ nke dubara m n’ọdọ mmiri ahụ, ụdị ụgbọ mmiri ahụ, ụgbọ mmiri ahụ, mkpara, mkpanaka ahụ, ahịrị ahụ, nko ahụ, nri ụja, oge nke ụbọchị na ụdị azụ m na - achọ ijide. Nakwa ole n'ime ha. Mgbasa ozi bụ ihe omume, ahịa bụ atụmatụ (nke na-ejikarị mgbasa ozi).
You ma na mbido mgbasa ozi izizi emere na England, ọ bụ maka akwụkwọ ekpere? Ma ọ bụ na ụlọ ọrụ TV nke mbụ bụ na 1941 maka elekere Bulova? Bet ya amaghị na mgbasa ozi isiokwu mbụ bụ "golf"! Mgbanwe nke mgbasa ozi enwetawo ihe ngosi dị ịrịba ama dịka igwe obibi akwụkwọ na telivishọn nke metụtara usoro mgbasa ozi nke ukwuu. Agbanyeghị, ịntanetị agbanweela mgbasa ozi ikekwe kachasị, anyị kwenyere na mgbasa ozi In-Text bụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-esote. Ya mere, ọ dị mkpa iji nyochaa ebe mgbasa ozi malitere iji ghọta nke ọma na anyị na-aga!
Mgbasa ozi adịwo kemgbe ogologo oge… n'eziokwu, ogologo oge karịa ka m nụtụrụla dị ka nke a infographic site Infolinks:
Tags: mgbasa oziakụkọ mgbasa oziakụkọ mgbasa ozi
Ihe Nzuzo nke Izu Nchọpụta Nchọgharị
4 Ndụmọdụ Ka Mma Maka “mmekọrịta”
Jenụwarị 10, 2012 na 3:13 PM
Echere m na Dentifrice Tooth Gel nwere ike ịbụ ntakịrị oge tupu oge na 1661. E wezụga nke ahụ, nke a bụ nnukwu ndepụta - yana ọtụtụ ọchị kwa!
Nke ahụ bụ ọmarịcha eserese, enweghị m ike ịghọta ihe faịlụ ahụ dị na Photoshop! akụkọ ihe mere eme nke mgbasa ozi bụ n'ezie akụkọ ihe mere eme nke azụmahịa, nkwukọrịta na mgbanwe ego. Maka m, ụlọ ọrụ mgbasa ozi malitere n'ezie na Madison Avenue NYV na mmalite 20thc mgbe ụlọ ọrụ malitere ịmalite, na-ejikọ nka, mgbasa ozi mgbasa ozi na akụrụngwa ndị ahịa. Bhere bu ezigbo akwukwo m kporo Information inn Beautiful site David McCandless: http://www.informationisbeautiful.net/ a ga na-agụ na Ama ndịna, n'ezie pushes na ókè pus.
Nka magburu onwe ya! Inglaghachi na mmalite nke mgbasa ozi. Ihe ọchị na ihe omuma.